Akụkọ Jacob Loveless na Martech Zone |
Edemede site na Jacob enweghị ịhụnanya
Jacob enweghị ịhụnanya
Jake Loveless enweela ọrụ afọ iri abụọ nke ime ka teknụzụ na-aga ngwa ngwa. Site na sistemụ azụmaahịa dị ala na Wall Street ruo na nyiwe weebụ buru ibu maka Ngalaba Nchebe ruo na netwọk microwave maka ụlọ ọrụ nkwukọrịta - Jake enyerela aka kwalite ngwanrọ na oke ọsọ ọhụrụ. Taa, Jake na-agba ọsọ Edgemesh, Ụlọ ọrụ na-eme ngwa ngwa weebụ zuru ụwa ọnụ o jikọtara ya na ndị mmekọ abụọ na 2016. Edgemesh na-enyere ụlọ ọrụ eCommerce aka n'ofe ọtụtụ ụlọ ọrụ na nyiwe na-ebuga 20-50% ngwa ngwa ibe ibu ndị ọrụ gburugburu ụwa.
Edgemesh: ROI nke Saịtị Ecommerce dị ka ọrụ
Sunday, December 5, 2021 Sunday, December 5, 2021 Jacob enweghị ịhụnanya
N'ime ụwa asọmpi e-azụmahịa, otu ihe doro anya: ihe gbasara ngwa ngwa. Ọmụmụ mgbe ọmụmụ na-aga n'ihu na-egosi na a ngwa ngwa saịtị na-eduga na ụba ntọghata udu, chụpụrụ elu ndenye ụkpụrụ na mma ahịa afọ ojuju. Mana ịnye ahụmịhe weebụ ngwa ngwa siri ike, ọ na-achọkwa ma ihe ọmụma miri emi nke imewe webụ na akụrụngwa “ọnụ” nke abụọ nke na-eme ka saịtị gị dị nso na ndị ahịa gị dị ka o kwere mee. Maka saịtị e-azụmahịa, na-ebuga arụmọrụ dị elu